Gaa Leta Museum Island na Berlin | Akụkọ Njem
La gara na Berlin na-ewetara anyị ọtụtụ na-akpali ịtụnanya. Ọ bụ obodo jupụtara n’akụkọ ihe mere eme nke nwekwara ike ịnye anyị ọhụụ ọhụụ dị iche iche na nke nwere ọtụtụ ihe. Otu n'ime ihe ndị anyị na-ekwesịghị ịhapụ ịga njem anyị na Berlin bụ Museum Island ma ọ bụ Museumsinsel na German.
La Museum Island bụ agwaetiti nke osimiri Spree kpụrụ n'etiti obi Berlin ebe ụlọ ngosi ihe mgbe ochie kachasị mkpa n'obodo ahụ dị. Agwaetiti ahụ nwere ọdịbendị dị oke mkpa nke na UNESCO ekwupụtala na ọ bụ World Heritage Site.
1 Akụkọ banyere Island Island
2 Ebe Ndebe Ochie ma ọ bụ Altes Museum
3 New Museum ma ọ bụ Neues Museum
4 Gamlọ ngosi Pergamon
6 Nationallọ Osisi Ochie ochie
7 Katidral nke Berlin
Akụkọ banyere Island Island
Museum Island nwere ogologo akụkọ ihe mere eme. Ebe ugwu nke agwaetiti ahụ bụ ebe obibi nke Eze Frederick William nke Anọ nke Prussia raara onwe ya nye nka na sayensị. Emebere ụlọ mgbe ochie izizi mba ofesi n’obodo a. Ọ bụ ọtụtụ ndị eze Prussia bụ ndị kwalitere atụmatụ a na mbụ ma emesịa, na narị afọ nke XNUMX, ọ ghọrọ akụkụ nke ntọala ọha na eze nke Prussian Cultural Heritage, nke na-ahụ maka ịchekwa mkpokọta na ebe ngosi ihe mgbe ochie. Ihe nchịkọta ihe ngosi nka na-enye anyị ohere igosi akụkọ ihe mere eme nke mmadụ site n'oge ochie ruo narị afọ nke XNUMX. N'oge Agha Worldwa nke Abụọ, e bibiri ụfọdụ ebe ngosi ihe mgbe ochie ma kewaa mkpokọta na Agha Nzuzo mana ejikọtaghachiri ha ma emechaa. Na Museum Island a ị nwekwara ike ịchọta Katidral Berlin na Ogige Obi oftọ ma ọ bụ Lustgarten.
Ebe Ndebe Ochie ma ọ bụ Altes Museum
Dị ka aha ya na-egosi, ọ bụ ụlọ ngosi ihe mgbe ochie kachasị na Museum Island, nke ewepụtara na 1830. Thelọ ahụ bụ otu n'ime ụwa mbụ emere maka naanị ebumnuche nke ụlọ ngosi ihe nka. Ọ na-apụta maka ịnwe ụdị ejiji neoclassical, nke na-eme ụlọ ahụ ka ọ bụrụ ọla n'onwe ya. A ngosi nka anyị pụrụ ịhụ a na-adịgide adịgide nchịkọta art na ọkpụkpụ si oge gboo ihe ochie, site Gris oge ochie na Alaeze Ukwu Rom. Ọ na-anọchi anya inwe bishọp a ma ama nke Cleopatra yana nnukwu mkpokọta nke nka Etruscan.
New Museum ma ọ bụ Neues Museum
Esisịt ini ke ẹkụre Old Museum, na-ewu nke New Museum n'àgwàetiti ahụ. O mebiri emebi na Agha Worldwa nke Abụọ, na-adị mkpọmkpọ ebe ruo mgbe mweghachi ya malitere na 1999, nke ga-adịru afọ itoolu. N’ebe ngosi ihe mgbe ochie a gosipụtara akụkọ ọdịbendị nke ndị nna ochie n’ụwa niile. Nelọ neoclassical iji mụta banyere akụkọ ihe mere eme nke mmadụ site na Stone Age ruo na Middle Ages. N'ime ụlọ ihe ngosi nka anyị nwere ike ịhụ okpokoro isi Neanderthal nke Le Moustier ma ọ bụ bust nke Nefertiti.
Gamlọ ngosi Pergamon
Nke a bụ ụlọ ihe ngosi nka a kacha eleta na Berlin ma nwee nku atọ. Lọ ihe ngosi nka ka a na-eweghachi, ihe ga-adịgide ruo ọtụtụ afọ, yabụ mgbe anyị gara ileta ụfọdụ nku nwere ike mechie. Enwere ike ịghọta ya dịka ha bụ ebe ngosi ihe mgbe ochie atọ dị iche na nke kpochapụwo ochie, Middle East na islam nka. Akụkụ kpakpando ya bụ Ọnụ Romanzọ Romanmá Rom nke Ahịa Miletus, ebe ịchụàjà Pergamon, Ọnụ Iszọ Ismá Ishtar ma ọ bụ Ihu Mushatta
Ebe ngosi nka Bode dị na mgbago ugwu agwaetiti a. Ọ bụ ụlọ ebe ndebe ihe mgbe ochie nke Agha Worldwa nke Abụọ mebiri nke ukwuu wee were oge iji wughachi ya. Na nke a ngosi nka i nwere ike ileta Nchịkọta Ihe Osise, Nchịkọta Art nke Byzantine na Kabinet Numismatic. Anyị na-achọta ụlọ ihe ngosi nka nwere ọrụ dị mkpa nke nka Europe. N'ime ha anyị nwere ike ịhụ 'La Madonna Pazzi' nke Donatello, ihe osise nke Dancer nke Antonio Canova ma ọ bụ sarcophagus oge ochie nke Rome. Na mpaghara ọnụọgụgụ, anyị nwere ike ịhụ otu n'ime mkpokọta mkpụrụ ego kachasị ukwuu n'ụwa nwere ego na mkpụrụ ego 4.000, rue mbata euro. A n'ezie na-akpali ebe maka ndị nwere a na-enwe ntụrụndụ nke numismatics.
Nationallọ Osisi Ochie ochie
Na gallery a, anyị ga - ahụ ọrụ sitere na Classicism, Romanticism, Impressionism na nka nke oge a. Nwere ike ịhụ ihe osise nke ndị na-ese ihe dịka Renoir, Monet, Manet ma ọ bụ Caspar David Friedrich. Na gallery ị nwekwara ike ịhụ ọla edo ịnyịnya nke Frederick William IV na ọrụ nke onye omenka Berlin Adolph Menzel. E nwekwara ọrụ ndị ọzọ na-ese ihe dịka Max Lieberman ma ọ bụ Carl Blechen.
Katidral nke Berlin
N'ime Museum Island anyị nwekwara ike ịhụ Katidral Berlin. Emechara na 1905, ọ bụ ụlọ okpukpe ya kachasị mkpa ma kwụpụta maka nnukwu dome ya na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Na-esote ụlọ a bụ Obí eze, n'ihi ya katidral dị ezigbo mkpa. N’Agha Worldwa nke Abụọ ụlọ a mebiri emebi, na-achọ nwughari ọtụtụ afọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Berlin » Ebe nkiri Museum na Berlin